Maalinta: 12-ka July, 2018
Aasaasiga Beerta Waxbarashada Carruurta ee Sanliurfa
ugu weyn 'Traffic Tababarka Park Carruurta ee Turkey si ay u siiyaan hub Sanliurfa malaastaan ​​degmada Metropolitan, abuurista mashruuca iyo fulinta tuuro aasaasiga ah iyo ka dibna loo ogaado goobta ka. Waad ku mahadsan tahay mashruucan inuu ka hirgalay Maşuk, carruurta Şanlıurfalı [More ...]
Hawlgalka Asphalt ee Taurus ilaa Badda
Dawlada Hoose ee Magaaladda Metropolitan waxay sii xoojisay shaqooyinka dhismaha isku mar ee isku xidha degmooyinka Tufanbeyli iyo Yumurtalik, oo kiiloo mitir ujira 208. 15 ee degmada 14 ee Adana waxay ku taalaa aagga mas'uuliyadda ka ah kun kilomitir oo laba jibaaran oo ku fidsan buuraha Taurus ilaa Badda Mediterranean. [More ...]
15 ee Ankara Gaadiidka bilaashka ah July
Sannad-guuradii N 15 Luulyo ee Hain Blow Initiative uyla oo ay la socoto abaabulkii degmada Ankara ee Magaalo-weyne, Shuhado-sharafteena sharafta leh ayaa lagu caarin doonaa Ankara iyada oo lagu tukanayo. Fagaaraha Qaranka ee Kizilay oo loo qaban doono barnaamijka Xusuus-qorka ayaa bilaabay u diyaar-garowga Dawladda Hoose ee Magaaladda. Marxaladda la aasaasayo [More ...]
Gaadiidka Kocaeli 15 July Free Free
Basaska dawlada hoose iyo gawaarida taraamka ee Kocaeli Magaalo Weyn ayaa ka faa'iideysan doona muwaadiniinta si lacag la’aan ah inta barnaamijka socdo. Macnaha guud, adeeggu wuxuu ka bilaabmay 15 Sabtidii, Luulyo [More ...]
Shaqaalaha tareenka, Çorlu 24 dadka ku dhintay shil tareen oo sababay geerida akhristayaasha wargeysyada Evrensel waxay qoreen aragtidooda. Kooxo ka shaqeeya tareenada akhristayaasha wargeysyada Hi Evrensel… [More ...]
Gaadiidka TCDD Co. Ku dhawaaqida lagu sameeyay bogga rasmiga ah ee Agaasinka Guud ee KPSS 2017 / 2 taas oo ka dhalatay magacaabista murashaxiinta degay 8. Liiska lagu dhawaaqay. Ku dhawaaqida TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, 4 kun oo kiiloomitir oo isku-xidhka wadooyinka ah ayaa dayactir lagu sameynayaa. Wadarta guud ee 409 milyan ee 2 kun oo tan oo asphalt ah ayaa loo isticmaali doonaa shaqooyinka lagu fulinayo jidka gaadiidka weyn ee 150. 500 km oo leh haadka 3 [More ...]
Magaalada Istanbul ee caasimadda ayaa go'aansatay in ay amaahato 61 million euro si loo dhiso tareenka Eminonu-Alibeykoy. SözcüEminonu-Alibeykoy Tram line 152 milyan 998 kun 679 [More ...]
Mashruuca Wadooyinka Gaarka ah wuxuu ku sii socdaa xawaaraha buuxa ee Şanlıurfa
In Sanliurfa, network ugu weyn ee Turkiga ee gaadiidka wadada, taas oo uu leeyahay mid ka mid ah codsiyada ee jidka la taaban karo dulfuulan inay noqdaan kuwo caafimaad qaba iyo saarta muddo dheer mudada dheer xal degmada Metropolitan, sii wadaan in ay ka shaqeeyaan Siverek. la qorsheeyey [More ...]
Wadooyinka iyo Wadooyinka Malatya
Xarunta Isku-dubbaridka Gaadiidka (UKOME), oo ka hoos shaqeysa Waaxda Adeegyada Gaadiidka ee Degmadda Malatya ee Magaalo Weynaha, ayaa qabtay kulankeedii Luulyo. Sida ku xusan qoraalka ka soo baxay Dowlada Hoose ee Magaalada, Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose Cali Yildirim [More ...]
Mashruuca Dawlada ee Sivas 'Smart Stop' mashruuca ORAN'dan 400 kun oo rodol ayaa lasiiyay deeqdan. Mashruuca Akıllı Smart Stop proj, oo ah tusaalooyinkii ugu horreeyay oo ay hirgalisay Agaasinka Adeegyada Gaadiidka Dawladda Hoose ee Sivas badhtamihii sanadkii hore. [More ...]
15 Gaadiidka Dadweynaha ee Bilaashka ah ee Diyarbakir bishii July
Magaalada Diyarbakir, 15 ayaa bixin doonta adeegyo gaadiid dadweyne oo bilaash ah Luulyo Dimuqraadiyadda iyo Maalinta Midnimada Qaranka. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalaweynta waxay ku dhawaaqday akoonkeeda warbaahinta bulshada mawduuca. Ogeysiiska, “15 July Dimuqraadiyadda [More ...]
Qaybta Guzeloba-Gursu ayaa la filayaa sanado
Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya waxay sii waddaa inay abuurto khadad cusub si kor loogu qaado qancinta muwaadinka ee gaadiidka dadweynaha. Wareegtadan dhexdeeda, khadka KL21, oo bixin doona gaadiid u dhexeeya Güzeloba Çamlık Neighborhood iyo Gürsu, duulimaadyo bilaw ah. Muddo sannado ah [More ...]